यी मानिसको छन् ८०० बच्चा, प्रत्येक हप्ता बन्छन् एक नयाँ बच्चाको पिता !
बिहीबार, २८ पुष, २०७३
एक मानिसको ८०० बच्चा कसरी हुनसक्छ ? हरेक हप्ता कसरी कसरी पिता बन्न सक्छ ? यो कुरा सुनेर तपाई अचम्ममा पर्नुभयो होला ? कुरा यस्तो रहेको छ ।